दसैंमा महिला र पुरूषलाई किन दिइन्छ छुट्टा छुट्टै आर्शिवाद ? - Himali Patrika
दसैंमा महिला र पुरूषलाई किन दिइन्छ छुट्टा छुट्टै आर्शिवाद ?
हिमाली पत्रिका २९ असोज २०७८, 8:05 am
काठमाडौँ । नेपालीहरूको महान चार्ड दसैंमा नौ दिनसम्म पूजाअर्चना गरेको जमरा, दहि, रातो अविर, केरा र चामलसहितको समिश्रणबाट तयार पारीएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरीने टिकामा नै विजयादशमीको महत्व छ । परिवारका सबै सदस्य एकै ठाँउमा बसेर, घरमा नवदुर्गा भवानीको पूजा गरेर, उमेरक्रमानुसार ठूला अनि क्रमशः सानाहरुले टीका, जमरा र आर्शिवाद थाप्ने चलन छ । उमेर पुगेका पाकाहरु साईतको टिका लगाउन आफूभन्दा ठूला मान्यजनकोमा जाने र नभएमा आफ्नै जीवनसाथी, जीवनसंगीनी या दाजूभाईकोमा जाने गर्दछन् ।
फूलपाती भित्राएर, महाअष्टमी र महानवमी पनि भित्र्याएर, घरमा माछा मासुका विभिन्न मिठा परिकारहरू बनाएर, सबै परिवाको साथ हर्स- उल्लासको साथ दशै मनाउने गरिन्छ । नेपालका सहज शहरदेखि असहज अन्कन्टार वस्तिसमेत आज विहानैदेखि एउटा फरक रौनकमा सजिएर ब्यस्त बनेको छ ।
केटाकेटीहरू नयाँ लुगा लगाएर यताउता कूदिरहेका होलान् ! के बुढा, के वृद्ध अनि के तन्नेरी, सबैलाई दशैंको उर्जायूक्त रङ्गले छोएको छ । अरू बेलाको टिका र आर्शिवाद भन्दा विजयादशमीको टिका र आर्शिवाद महत्वपूर्ण हुने परम्परा रहेको छ । यो दिन आफु भन्दा ठुलाको हातबाट टका र जमरा लगाई आर्शिवाद थाप्ने गरिन्छ ।